Imidlalo yamagundane engcono kakhulu yezingane | Iforamu yeselula
U-Eder Ferreno | 22/11/2021 11:41 | Imidlalo
Ratchildren yilabo abasebasha bachitha amahora bevaleleke ekamelweni labo bedlala ku-inthanethi nabanye abadlali. Lena okungenani incazelo yayo, umqondo oseneminyaka embalwa unathi futhi obonakala ungayi ndawo. Le nhlangano yaqala eminyakeni eyishumi edlule futhi isekhona namanje. Uma ungomunye noma uzicabangela, lena imidlalo engcono kakhulu yezingane zamagundane.
Kunemidlalo eminingi ehlobene kakhulu nezingane zamagundane.. Ngakho-ke, ngezansi sikushiya nokukhethwa kwemidlalo engcono kakhulu yezingane zamagundane. Kungakhathaliseki ukuthi ungomunye noma uzibona ungomunye, lena imidlalo okungafanele iphuthelwe kuqoqo lakho futhi uzokwazi ukuyidlala amahora amaningi ngaphandle kokuphazamiseka.
5 Indlela Yokuhlonza Izingane Zegundane
Siqala ngakho omunye wemidlalo ehlotshaniswa kakhulu nezingane zamagundane. I-Minecraft iyinhlangano yakudala emakethe, umdlalo osuneminyaka eminingi utholakala, kodwa usenayo ibutho elikhulu labalandeli emhlabeni jikelele. Lona futhi umdlalo onephesenti elikhulu lalabo okuthiwa yizingane zamagundane abawudlalayo ngokuqhubekayo, ngakho yisihloko obungeke uphuthelwe ohlwini lwalolu hlobo.
Kungani iMinecraft ingomunye waleyo midlalo yengane yamagundane? Uzokwazi ukubona ukuthi izingane okuthiwa amagundane yilabo badlali abangongoti kulo mdlalo. Bazazi zonke izindlela zokupheka, bavikela izindawo zabo njengoba kungekho omunye umuntu okwenzayo, bakha kangcono kunanoma ubani omunye, bazi zonke izinhlobo zamaqhinga okuqhubekela phambili futhi bangakwazi ukwenza zonke izinhlobo zezinto ezizobasiza bathuthuke. Bangabadlali abagqama kakhulu kubadlali abaningi kuyona, banyakaza okwenhlanzi emanzini eMinecraft.
I-Minecraft ingenye yemidlalo lapho igagasi lokuqala lalaba okuthiwa yizingane zamagundane lenzeka futhi iyaqhubeka nokuba ngomunye wemidlalo eyintandokazi yalolu hlobo lomsebenzisi. Ngakho-ke uma ufuna ukuba munye noma ufuna ukwazi ukuthi ungomunye, uma uchitha amahora amaningi eMinecraft, usuyayazi impendulo.
I-Call of Duty iseduze ne-Minecraft omunye wemidlalo lapho wawungabona khona lelogagasi lokuqala noma isizukulwane salabo okuthiwa izingane zamagundane. Leli gagasi laqondana nokuthuthuka kwalo mdlalo emakethe, owaziwa ikakhulukazi ngasekupheleni kwawo-2000. Lezi izinsuku lapho leso sizukulwane sokuqala sezingane zamagundane sazalwa, ngokwamakhasi amaningi ewebhu. Imodi yabadlali abaningi ye-Call of Duty ingenye yezikhiye noma izizathu ezisize ukuduma kwayo phakathi kwalaba basebenzisi.
Ukuba khona okukhulu kwezingane zamagundane kulo mdlalo yinto ehlale idala impikiswano ngemodi yabadlali abaningi noma i-Battle Royale phakathi kwabasebenzisi. Kunenqwaba yezingane zamagundane, ezivela emazweni amaningi emhlabeni jikelele, ngakho-ke uzobhekana nazo ngazo zonke izilimi. Yilabo badlali abazokuthuka uma ubabulala noma usesimweni esingcono kunabo, abazokuthuka uma udlala kabi kunabo noma ubulale izitha ezimbalwa. Noma yini oyenzayo uyazi ukuthi ngeke ilunge ngokwanele.
Izinhlobo ezahlukene zomdlalo osezikhishiwe, izilandeli zawo eziningi, zisaqhubeka nokuthandwa yizingane zamagundane. Yingakho i-Call of Duty isabhekwa njengenye yaleyo midlalo ebalulekile yezingane zamagundane. Imodi yayo yabadlali abaningi ingenye yezizathu ezenza kube nabaningi kulesi sihloko futhi kubonakala sengathi ngeke kube nezinguquko, njengoba kusengumdlalo onebutho labalandeli abathembeke kakhulu emhlabeni wonke namuhla.
I-Fortnite ingenye yemidlalo ethandwa kakhulu yezingane zamagundane namuhla, umdlalo othandwa kakhulu yisizukulwane esisha sezingane zamagundane. Kungumdlalo kwabaningi othathe izintambo ezihlokweni ezifana ne-Call of Duty emakethe. I-Battle Royale yabo iyisilungiselelo esihle kakhulu salezi zingane zamagundane, okuyilabo basebenzisi abaklabalasa futhi abathukayo ngaphezu kwanoma ubani uma bedlala, ngokuqinisekile uzokwazi ukubabona ngokushesha okukhulu uma udlala.
Izingane zamagundane yizo ezinezikhumba ezinhle kakhulu, labo abakha okuhle kakhulu, labo abawazi wonke amaqhinga afihliwe e-Fortnite noma labo abanezikhali ezinhle kakhulu emdlalweni. Ngakho-ke uyazi ukuthi yini ozoyithola: ukuthukwa yonke indawo. Ngokungabi naso leso sikhumba sakamuva, ngenxa yokungabi muhle kakhulu ekudubuleni, uma ubabulala ngaphambi kokuba bakuqedele, uma ugcina ungcono noma ubi kakhulu ohlwini ... Kungakhathaliseki ukuthi kungani, lindela ukumemeza nokuhlambalaza yonke indawo.
I-Fortnite iwumdlalo odume kakhulu, noma kubasebenzisi abaningi indawo esegeyimu igcina isinobuthi, ezimeni eziningi ngenxa yalezo zinhlamba nokulwa okufunwa ngabasebenzisi abaningi.
I-GTA ingenye yezigameko lapho sithola khona izingane eziningi zamagundane, kungakhathaliseki ukuthi iluphi uhlobo lomdlalo. Ngenye yalezo zihloko ezidume kakhulu phakathi kwalaba basebenzisi. Ikakhulukazi kumodi yabadlali abaningi yale geyimu (isibonelo ku-GTA 5) kunenqwaba yezingane zamagundane ezikhona, into abaningi benu abayibona manje. Njengoba bekhonjwa ngendlela efanayo nakweminye imidlalo ekulolu hlu.
Uma uhlangana nabo, uma ubabulala ngaphambi kokuba bakubulale, uma bekubulala ... Kungakhathaliseki ukuthi isimo sinjani, uma wenza into abangayithandi ungalindela ukuthukwa okuningi okuvela engxenyeni yabo. Lolu chungechunge lwemidlalo lusathandwa kakhulu phakathi kwezingane zamagundane, ngenxa yokuba khona kwale modi yabadlali abaningi kuzo, ngakho-ke uzothola eziningi zazo uma udlala kunoma iyiphi idivayisi yakho. Kuhle ukuyilungiselela, njengoba ihlala njalo kulezi zinhlobo zemidlalo, ngeshwa.
Indlela Yokuhlonza Izingane Zegundane
Sikhulume ngeminye yemidlalo engcono kakhulu yezingane zamagundane, kanye naleyo midlalo esinenani elikhulu lalaba okuthiwa izingane zamagundane. Ngaphezu kwalokho sikutshele okuthile esingakulindela njalo kuye, okuyinhlamba. Iqiniso liwukuthi kunezici ezimbalwa ezizosisiza ukukhomba ngokushesha ingane yegundane kunoma yimuphi umdlalo we-inthanethi. Lezi izici noma izindlela zokwenza ezizosisiza ukuthi sazi ukuthi sibhekene nengane yegundane lapho sidlala:
Ubudala: Igama labo likusho ngokucacile, futhi ukuthi bayizingane, ezimweni eziningi kusukela eminyakeni engu-8 kuya kwengu-16 ubudala. Bayizingane ezinolwazi oluncane futhi impendulo yazo kukho konke iwukuthuka, ngoba abazi lutho olunye. Futhi, imidlalo abayidlalayo ivamise ukuba imidlalo edumile yangaleso sikhathi noma leyo edlalwa i-YouTube abayithandayo ngaleso sikhathi.
Ukumemeza nokuthuka: Lena enye yezindlela ezicace kakhulu zokuhlonza izingane zamagundane uma sidlala ku-inthanethi. Singalindela ukuthethiswa okukhulu kanye nokuthukwa okuningi. Bakholelwa ukuthi bangcono kunabanye abadlali emdlalweni, ngakho-ke singalindela leso simo sengqondo kubo, ngokuklabalasa okukhulu, ukuzidla kanye nokubiza amagama. Ikakhulukazi uma singcono kunabo yilapho singathola khona lokho kumemeza.
I-Trolls: Lesi isimo sengqondo esijwayelekile uma bengadlali kahle emdlalweni. Uma izinto zingahambi njengoba bekulindele, kuvamile ukuthi bazoqala ukukucasula futhi baziphathe njengama-troll wangempela. Kuyisimo sengqondo esivamile, okufanele sisicabangele, kodwa kuyinto ebonisa ukuthi ukuntula okucacile kokuvuthwa ohlangothini lwabo.
Imakrofoni: Esinye isici esivame ukutholakala ezinganeni zamagundane ukuthi yizona ezihlale zivulekile imibhobho. Yibo abamemezayo nababanga umsindo omkhulu kunabo bonke ngezwi eliphezulu kakhulu. Lokhu kuyinto engaphazamisa abadlali abaningi futhi icasule kakhulu, ngakho-ke kufanele ulungele lesi simo uma ufaka omunye wale midlalo.
Amakhophi: Esinye isici esingababona futhi ukuthi imishwana yabo eminingi noma ukuziphatha kwabo kumane kungamakhophi abanye abasebenzisi be-YouTube abadumile ngaleso sikhathi. Ngokuqinisekile ungabona ukuthi bakopisha izinkulumo esezivele sizazi kwabanye abantu, kodwa lokhu kuyinto engabikezelwa, njengoba beyizingane.
Uma ukucabangela lokhu, uzokwazi ukwazi ukuthi ingane yegundane futhi ngaleyo ndlela ungangeni emdlalweni wakhe. Imidlalo enemodi yabadlali abaningi eku-inthanethi iyindawo lapho singalindela khona amagundane amaningi, ngeshwa kwabaningi. Ngakho-ke kuhle ukuthi uzilungiselele futhi ungavumeli ukuba khona kwabo konakalise ulwazi lwakho lokudlala, ngoba lokhu akuyona into efanelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Imidlalo » Imidlalo engcono kakhulu yezingane rat